कसरी लिने अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति ? हेर्नुहोस् सबै प्रक्रिया « Salleri Khabar
कसरी लिने अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति ? हेर्नुहोस् सबै प्रक्रिया
१७ पुस, काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आजदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागको अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति लिइसकेका र हाल पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहनेले अनलाइनबाटै सेवा पाउने भएका हुन् ।